Sii deynta Gnome 3.38 horey ayaa loo shaaciyey waana kuwan warkiisa | Laga soo bilaabo Linux
Kadib dhowr bilood oo horumar ah, Kooxda Gnome waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan sii deynta nooca cusub ee deegaanka desktop-ka "Gnome 3.38" Marka loo barbardhigo nuqulkii hore, ilaa 28 kun oo isbeddel ayaa la sameeyay, hirgelinta taas oo ay ka qaybgaleen 901 horumariyayaal.
Kuwa ugu cusub in lagu soo bandhigay qaabkan cusub, taasi waa taas qaybaha kaladuwan ee kor lagu soo jeediyey dhammaan codsiyada badanaa la isticmaalo waxaa lagu badalay aragti kooban taas oo u oggolaanaysa codsiyada in dib loo habeeyo oo loo qaybiyo fayllada uu abuuray isticmaalaha.
Jiidida iyo hoos u dhigista codsiyada waxaa lagu sameeyaa iyadoo la dhaqaajinayo jiirka iyadoo la qabanayo badhanka si loo gujiyo.
Isbeddel kale oo aan isla markiiba ku ogaan karno qaabkan cusub ee Gnome 3.38 ayaa ah ku soo dhawow socodsiinta la soo bandhigay markii isticmaaleyaashu ay soo galaan markii ugu horreysay ka dib markii la dhammeeyo dejinta hore. Isku xirka wuxuu soo koobayaa macluumaadka ku saabsan astaamaha ugu muhiimsan ee desktop-ka wuxuuna bixiyaa booqasho hordhac ah oo leh sharaxaad mabaadi'da shaqada. Codsiga waxaa lagu qoray Rust.
Ku habeeyaha, qeybta maamulka isticmaalaha, hadda waxaad dejin kartaa kantaroolka waalidka ee akoonnada joogtada ah. Isticmaalaha la siiyay, waad ka hortagi kartaa barnaamijyada qaarkood ee lagu rakibay inay ka muuqdaan liiska dalabyada. Xakamaynta waalidka sidoo kale waxaa lagu dhex daray Maareeyaha Rakibaadda Codsiga waxayna u oggolaaneysaa in la oggolaado rakibidda barnaamijyada la xushay oo keliya.
Qaab-bixiyuhu wuxuu soo bandhigayaa a interface iskaanka faraha cusub si loo xaqiijiyo dareemayaasha faraha.
Ikhtiyaar lagu daray si loo joojiyo dardargelinta qalabka USB xubnaha aan la fasaxin ee ku xiran inta lagu jiro qufulka shaashadda.
Qalabka shaashadda gudaha GNOME Shell ayaa dib loo habeeyay si loo isticmaalo serverka warbaahinta PipeWire iyo Linux kernel API si loo yareeyo isticmaalka kheyraadka loona hagaajiyo ka jawaab celinta inta la duubayo.
Qaabaynta dhowr-kormeer kuwa isticmaala Wayland, mawjadaha kala duwan ayaa loo qoondeyn karaa cusbooneysiinta shaashadda kormeere kasta.
Software-ka Khariidadaha Gnome waxaa loo habeeyay si loogu isticmaalo taleefannada casriga ah. Qaabka muuqaalka satalayt-ka, awoodda lagu muujiyo calaamadaha ayaa la bixiyaa. Taageero lagu daray awood siinta muuqaalka khariidada qaabka habeenkii.
Sanduuqa wadahadalka si loogu daro saacadda adduunka ayaa la beddelay, kaas oo soo bandhigaya waqtiga la tixgelinayo aaga waqtiga ee goob cayiman. Saacadda digniinta, awoodda lagu dejin karo muddada calaamadaha iyo waqtiga u dhexeeya alaarmiga soo noqnoqda ayaa lagu daray.
Ciyaaraha by Caweyska Dalmar, natiijooyinka raadinta ayaa hadda lagu muujiyey qaabka muuqaalka guud, kuu ogolaanaya inaad bilowdo ciyaarta aad raadineyso isla markiiba.
Khaanadaha Gnome, waxay ku dareysaa taageero tifaftirka faylasha XML mashiinka dalwaddii loogu talagalay beddel hababka libvirt ee horumarsan taas oo aan laga heli karin isticmaalaha isticmaalaha caadiga ah. Markaad abuureyso mashiin cusub oo casri ah, Sanduuqyadu waxay hadda kuu oggolaanayaan inaad gacanta ku doorato nidaamka hawlgalka haddii aan si toos ah loo ogaan karin.
Astaamo cusub ayaa la soo jeediyay loogu talagalay Calculator, Cheese, Tali, Sudoku, Robotyada, Quadrapassel, iyo Nibbles webcam software.
Emulator-ka Terminal-ka ayaa casriyeeyay nidaamka midabka qoraalka. Midabada cusubi waxay bixiyaan farqi weyn oo ka dhigaya qoraalka mid sahlan.
Sawirada GNOME waxay kudareysaa shaandhayn muuqaal cusub, Trencin, oo la mid ah shaandhada 'Clarendon' ee barta 'Instagram' (waxay iftiimisaa iftiiminta oo mugdi gelisaa meelaha mugdiga ah).
Waxaa lagu daray dib u eegis cusub oo ah qalabka raadinta Tracker 3 kaas oo badiyaa barnaamijyadii ugu weynaa ee GNOME loo turjumay. Nooca cusub wuxuu soo bandhigayaa isbeddello lagu hagaajinayo amniga oo ah kala soocida codsiyada loo soo gudbiyay qaabka Flatpak iyada oo u oggolaanaysa xakameyn cad oo ku saabsan xogta arjiga la weydiin karo isla markaana lagu muujin karo raadinta.
Fractal, macmiil u ah barnaamijka isgaarsiinta baahinta ee 'Matrix', wuxuu horumariyay dib u soo celinta fiidiyowga isagoo daawanaya taariikhda farriinta; thumbnails fiiriyeynta fiidiyowga ayaa hadda si toos ah ugu soo muuqanaya taariikhda farriinta waxayna u ballaadhinayaan fiidiyoo buuxa iyagoo gujinaya.
Ugu dambeyntii, waxay sugeysaa oo keliya in in version cusub this horeba waxaa laga heli karaa kanaallada rasmiga ah qaybinta Linux ee aad door bidayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sii deynta Gnome 3.38 horey ayaa loo shaaciyey waana kuwan warkiisa